Xinhua Myanmar - တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အီရန်နျူကလီးယားအရေး ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်သို့ တက်ရောက်မည်
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အီရန်နျူကလီးယားအရေး ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်သို့ တက်ရောက်မည်
တရုတ် ဝမ်ရိ အီရန် နျူကလီးယား
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ) Politics, Law & Military
ပေကျင်း၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန် - ခေါန်ရိန်
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိသည် ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင် ကျင်းပမည့် အီရန် နျူကလီးယားအရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ၏ ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်သို့ တက်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဝမ်ဝန်ပင်းက ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်၌ ကြေညာခဲ့သည်။
အဆိုပါ ကွန်ဖရင့်ကို ဥရောပသမဂ္ဂမှ ကြီးမှူးကျင်းပခြင်းဖြစ်ပြီး ရုရှား၊ အီရန်၊ ဗြိတိန်၊ ပြင်သစ်နှင့် ဂျာမနီ စသည့်နိုင်ငံများလည်း တက်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Chinese FM to attend video conference on Iranian nuclear issue
Source: Xinhua| 2020-12-18 23:07:06|Editor: huaxia
BEIJING, Dec. 18 (Xinhua) -- Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi will attendavideo conference of foreign ministers on Iranian nuclear issue, which will be held on Dec. 21, Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin announced here Friday.
The conference will be hosted by the European Union, the spokesperson said, adding that Russia, Iran, the United Kingdom, France and Germany will also attend the conference. Enditem
Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi deliversaspeech titled "Firmly Uphold Multilateralism and BuildaCommunity withaShared Future for Mankind" atahigh-level conversation of the United Nations Economic and Social Council, "Multilateralism after COVID-19: what kind of UN do we need at the 75th anniversary?" via video link, in Beijing, capital of China, July 17, 2020. (Xinhua/Liu Weibing)
Previous Article အမိမြေသို့ မကာအို ပြန်လည်ရောက်ရှိခြင်း ၂၁ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အလံတင်အခမ်းအနား မကာအိုတွင် ကျင်းပ
Next Article တရုတ်-ရုရှား နှစ်နိုင်ငံက ကမ္ဘာ့မဟာဗျူဟာတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးထိန်သိမ်းမှုဆိုင်ရာ သက်ဆိုင်ရာစာချုပ် ရေးထိုးခဲ့ခြင်းသည် အားကောင်းသော အာမခံချက်ကို ရရှိစေကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောကြား